Taariikhda Gudoomiyihii Olombikada Soomaaliyeed Aadan Xaaji Yabarow (Wiish) – Africa Sports Network
Mar 08, 2016 FAAQIDAADA CAYAARAHA 0 1489 Views By Tajuddin
Aden Haji Yabarow ( Wiish)
Allaha u naxriistee Gudoomiyihii Guddiga Olombikada Soomaaliyeed Aadan Xaaji Yabarow waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1947-dii. waxa uu yaraantiisii ahaa mid waxbarashada aad u jecel, sidaas darteedna uu Quraanka Kariimka ah ku bartay intii u dhexeysey sanadihii 1956-1959-kii.
Marxuumku wuxuu waxabarashaddii dugsiga H/Dhexe ku dhamaystay Dugsiga Macalin Jaamac 1959-1963-dii.
Waxbarashadiisii dugsiga sarena waxa uu qaatay intii u dhexeysay sanadihii 1964–1967-dii, isaga oo ka qalin jebiyey Dugsigii sare ee Badda ee magaalada Muqdisho.
Allaha u naxriistee Aadan Xaji Yabarow wuxuu aad u jeclaa ciyaaraha kala duwan, gaar ahaan kubaddda koleyga, wuxuuna bartay garsoornimada kubadda koleyga, asagoo qaatay sanadkii 1969-kii shahaadada heerka 3aad ee garsooranimada kubadda koleyga, waxaana ka mid ahaa dadkii la qaatay Xaaji Colow, Gocoso, Cusmnaa Tahliil Awfaamo, Shuceyb, Darbane Muudey, Yaxya Shuceyb iyo Cumar Sheekh Isaaq. Sannadkii 1970-kii waxaa la qabtay tartankii kubadda Koleyga, waxaana ku guuleystay kooxdii la oran jiray (Agoonta) ama Orfano.
Sanadkii 1971-dii wuxuu ka mid noqday shaqaalihii lagu aas’aasay Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha.
Wiish waxa uu qaatay shahaadadii heerka 2-aad ee garsooranimadda kubaddda koleyga sanadkii 1972-kii. Waxayna ku guuleysteen isaga iyo Cabdullahi Siciid “Indhadeero” in ay abaabulaan ardayda Gobolka Banaadir oo ay ka mid ahaayeen Cali Cusmaan, Aadaamo, Cumar Riingo iyo Kooxdii Iftiin in loo diro gobollada Waqooyi si looga soo abaabulo tartankii Ciyaaraha gobollada, kaas oo noqday markii dambe Festival-ka ugu weyn dalka Soomaaliya. Waqtigaas xiriirka kubadda koleyga wuxuu qaban jiray tartanno MINI BASKET ah oo dugsiyada iyo degmooyinka Gobolka Banaadir loo qaban jiray, taas oo aakhirkii ay ka soo baxeen halyeeyo heer qaran u saftay kubadda koleyga.
Sanadkii 1973-dii dadaal dheer ka dib, wuxuu qaatay shahaadadii heerka 1aad ee kubadda koleyga. Waxaana billad sharaf lagu siisay isaga iyo Diinaash tartankii ciyaaraha gobollada ee sanadkaas la qabtay. Waxayna ka qayb galeen tartan kubadda koleyga ah ee lagu qabtay wadanka Afrikada Dhexe, waxaana wafdiga hogaaminayay Maxamed Xuseen Hadi.
Sanadkii 1974 – 76-dii Marxuun Wiish wuxuu ka mid noqday dhallinyaro tababar maamulnimo loogu diray Machadka Maamulka iyo Maareynta SIDAM,isaga oo halkaas ka soo qaatay shahaadada maamulka iyo maareynta. Gudoomiye Wiish wuxuu ahaa Xoghayihii Guud ee Ciyaaraha Gobollada Dalka sannadadii 1975 -1989kii. Wiish wuxuu isku waday shaqadda garsooranimadda iyo tii Wasaaradda Shaqadda, Dhalinyaradda iyo Isboortiga, waxaana uu shahaadadiisii garsooranimo kubadda koleyga ee heerka caalami (international referee) ku soo qaatay dalka Kuwait Sanadkii 1976-dii.
Sannadkii 1978-dii Aadan Xaaji Yabarow waxa uu noqdey Xoghayihii Guud ee Xiriirka Somaaliyeed ee Kubadda Koleyga, wuxuuna ku guuleystay in in seminar caalamai ah ee kubadda kolayga ah lagu qabto magaalada Muqdisho, kaas oo ay casharro ka bixiyeen khubarro ka socota Xiriirka Kubadda Kolayga ee caalamiga ah FIBA iyo kan Afrika ee AFABA.
Hamigii uu ka lahaa dadaalkaas wuu gaaray markii ay kooxda kubadda kolayga Soomaaliyeed ee ay hanteen billadii dahabka ahayd ee tartankii ciyaarihii Jaamacada carabta ee lagu qabtay magaalada Muqidisho sannadkii 1979kii.
Sannadkii 1981-dii Aadan Xaaji Yabarow (Wiish) waxa uu noqday Agaasimihii Waaxda Dhallinyarada iyo Isboortiga.Sannadkii 1985 -1990-kii waxa uu noqday ku-xigeenka Agaasimaha Guud ee Wasaaradda dhalliyarada iyo Isboortiga.
Wixii ka danbeeyay 1990-kii waxaa ka dhacay dalka Soomaaliya dagaallo iyo bur-bur , Wiishna kama mid noqon dadkii isaga barakacay dalka Soomaaliya, waxa uuna ku sii nagaaday magaaladii Muqdisho ee uu ku dhashay.
Sanadkii 1993-dii marxuum Wiish iyo mas’uuliyiin kale oo qaarkood dhintay u istaageen dib u soo nooleynta Isboortiga dalka Soomaaliya oo xilligaasi kala xer xernaa, iyadoo xilligaas loo doortay Gudoomiye ku-xigeenka 3-aad ee Guddiga Olombikada Soomaaliyeed (GOS) iyo Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubbada Koleyga(X.S.K.K).
Sanadkii 1996-dii wuxuu hoggaamiyay wafdigii ka qayb galay ciyaarihii Olombikada Adduunka ee lagu qabtay magaalada Atlanta ee dalka Maraykanka, wafdigaas waxaa dalka dib ugu soo noqday marxuum Wiish intii kale waxay iska dhiibeen dalka Maraykanka. Sanadkii 1997-dii Wiish waxa uu mar kale noqday gudoomiye ku-xigeenkii 3-aad ee G.O.S iyo Gudoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda koleyga.
Sanadkii 2004tii, wuxuu hoggaaminayay wafdigii ka qayb galay Ciyaarihii Olompikada ee ka dhacay Magaalada Athens ee dalka Giriiga.
Sanadkii 2005-tii Wiish waxaa loo doortay Gudoomiye ku-xigeenka 2-aad ee G.O.S iyo Guddoomiyaha XSKK.
Sanadkii 2006-2008-dii waxaa guddoomiye loo doortay Cabdulqaadir Ibraahim Gacal “Abkow”, ka dib markii ciyaaraha laga ganaaxay marxuum Faarax Weheliye Cadow ( Sendiko), waxaana Wiish loo doortay Guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee G.O.S iyo Gudoomiyaha XSKK. Sannadkii 2008-dii, waxa uu hogaaminayay wafdigii ka qayb galay Ciyaaraha Olompikada ee lagu qabtay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha.
Bishii maarso 2009-kii, Aadan Xaaji Yabarow Wiish waxaa loo doortay in uu hoggaanka u qabto Guddiga Olompikada Soomaaliyeed ee G.O.S, xilligaasi oo uu ka tanasulay xilkii muddada dheer uu soo hayay ee Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Koleyga. Doorashadaas ka dib waxa uu safar ku aaday Magaalada Lausanne ee dalka Switzerland, halkaasi oo uu kulamo kala duwan kula qaatay markii ugu horeysay isagoo Gudoomiyaha G.O.S ah madaxda International Olympic Committee (IOC).
Marxuun Wiish intii uu howshan GOS hayay, wuxuu GOS ku baahiyey gobollada dalka oo dhan, iyagoo u qaybiyay Zones, si howsha GOS looga fuliyo gobollada dalka oo dhan, taas oo fursad u siisay in la qabto tartankii ugu horreeyay gobollada dalka in lagu qabto magaalada Garoowe. Intaas waxaa barbar socday in tababarro iyo seminaaro xiriirrada kala duwan, taas oo kor loogu qaadayo tayeynta horumarinta ciyaaraha. Waxaa kale oo jira in markii ugu horreysay wadanka Soomaaliya ay hesho dadka ku soo takhasusay maamulka iyo maareynta Isboortiga, taas oo ay ka soo qalin jebiyeen ilaa seddex qof oo uu ku jiro Gudoomiye ku xigeenka 1-aad ee GOS Duraan Axmed Faarax. Intaas waxaa dheer in International Olympic Committee (IOC) ka hirgelisay magaalada Garowe Sports village oo ka kooban garoomo kubbadda cagta ah, Kubadda koleyga, Kubadda gacanta, xafiisyo iyo hool weyn oo shirarka caalamiga ah lagu qabto.
Waxaa dib u habeyn lagu sameeyay qaabkii uu ku shaqeyn jiray Guddiga GOS, waxaana loo sameeyay action plan iyo strategic plan taas oo ay ka qayb qaateen kaadiriin ku xeeldheer noocyada kala duwan ee ciyaaraha, waana lagu guuleystay howshaas, iyadoo qaar ka mid ah ay seminaarro iyo tababarro ka soo fuliyeen wadamada Afrika qaarkood oo aan weli gaarin heerka ay Soomaaliya oo 20 sano dowlad la´aan ah ay ka gaartay ciyaaraha.
Mudadii yareyd uu xilka guddoomiyenimada hayay waxaa lagu xasuustaa howlkarnimo iyo u heelanaanta hormarinta isportiga, waxaanna oran karnaa wuxuu ahaa madaalihii sportiga Soomaaliya, isagoo safka hore kaga jiray muddo ka badan 40 sano.
Taariikhda Aadan Xaaji Yabarow Wiish oo aad u dheer halkaan lagu koobi karo, balse waxa uu ahaa shaqsi sport,waxa uu ku geeriyooday April 4,2012 weerar ismiidaamin ay geysatay gabar ka tirsaneyd Ururka Al Shabaab, taasi oo beegsatay Xaflad loogu dabaal-degayay sanad-guurada koowaad ee dib u howlgelinta Telefishanka Qaranka Soomaaliyeed (SNTV) oo ka dhaceysay Xarunta Golihii Murtida iyo Madadaalada (National Theatre) ee magaalada Muqdisho.
Marxuumku wuxuu ka soojeeday qoys jecel sportiga, wuxuuna ifka kaga tegay carruur uu ka mid yahay Xasan Aadan Yabarow oo ka mid ah garsoorayaasha caalamiga (FIFA) ee kubadda cagta, waxa uuna sanadkan ku guuleystay,loona aqoonsaday garsoorayaasha ugu wanaagsan qaaradda Afrika. waxaana hore u geeriyooday walaalkii Cabdulqaadir Xaaji Yabarow “Yeman” oo ahaa nin ay walaalo ahaayeen, waxa uuna ka mid ahaa garsoorayaasha kubadda cagta iyo kubbadda kolayga Soomaaliya.
Aadan Xaaji Yabarow Wiish, Cabdulqaadir Ibraahim Gacal “Abkow”, Duraan Axmed Faarax, Faarax Weheliye Cadow ( Sendiko), FIFA, Garowe Sports village, Guddiga Olombikada Soomaaliyeed (GOS), International Olympic Committee (IOC), Kubadda gacanta, Kubadda koleyga, kubbadda cagta ah, Machadka Maamulka iyo Maareynta SIDAM, National Theatre, Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubbada Koleyga(X.S.K.K)
Taariikhda Gudoomiyihii Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya Faarax Sendiko Taariikhda Halyeyga bootinta dheer Cabdulle Nuur Waasuge
Cabdulle Nuur Waasuge waxa uu ku dhashey magaalada Beledweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya sanadkii 1941-kii, yaraantiisii wuxuu...